Ha na-anwale ntụkwasị obi nke netwọdụ fiber optic iji chọpụta ala ọma jijiji | Akụkọ akụrụngwa
Ala ọma jijiji bụ otu n’ime ihe na-akpata ọdachi kacha egbu ndị mmadụ. O di nwute, ụdị onu a naghị ebu amụma ha nke ọma tupu oge eruo ka e wee nwee ike wepụ ebe a ga-emetụta. Iji gbalịa ịbawanye, n'ụzọ ọzọ, gbasaa ọnụ ọgụgụ nke seismograph nke na-enyere aka ịkọ ụdị ọdachi ndị a, Mahadum Stanford emepela ihe mmetụta dị iche iche yana netwọkụ fiber optic ka ọtụtụ ntanetị seismograph dị na mpaghara ndị ahụ niile ebe eriri anya dị. , ịmara mgbe niile ihe na-eme n’ime ụwa.
Ngwunye mmanụ na-eji usoro yiri nke ahụ achọpụta ụdị ịma jijiji ọ bụla nwere ike imetụta ọ bụghị naanị olulu mmiri ha na-egwu ala mana iguzosi ike n'ezi ihe nke ikpo okwu niile. Site na ọdịdị ya, eriri optic dị ezigbo nhịahụ maka ịma jijiji, ya mere mgbanwe ọ bụla na steeti ya ma ọ bụ ịma jijiji na-akpata mgbanwe nwere ike ịdekọ iji chọpụta ihe bụ ihe kpatara gbochiri ma ọ bụ gbagọọ mgbaama ma gbalịa idozi nsogbu ahụ.
Na Septemba 2016, Mahadum Stanford arụnyere ụgbụ fiber optic nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 5, nke ọ kwadebere na ihe mmetụta nwere ike ịchọpụta ụdị mmegharị ọ bụla, n'agbanyeghị obere. Kemgbe ahụ, dị ka Mahadum si kwuo, egosila na ọ bụ ụzọ karịrị ịrụ ọrụ nke ọma Mgbe ị na-atụgharịgharị ụdị mmegharị ụwa ọ bụla, n’eziokwu ruo ugbu a, ọ nweela ike idekọ ihe omume dị iche iche 800. N'ezie, nnwale a jisiri ike chọpụta ala ọmajiji 8,2-magnitude nke dakwasịrị Mexico na mbido Septemba, agbanyeghị na ọ kewapụrụ ya karịa kilomita 3.000, mana n'ezie, oge agafeela inye akara mkpu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ha na-anwale ikwesị ntụkwasị obi nke netwọk fiber optic iji chọpụta ala ọma jijiji
Huawei na-arụ ọrụ na smartphone na-agbanwe agbanwe
N'ezie, ironing na-aga akwụsị kpamkpam na ihe niile